Krysia Lenzo arinta ugu sareysa ee doorashada waa sharci iyo amar [Lahaanshaha Krysia Lenzo] | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Krysia Lenzo arinta ugu sareysa ee doorashada waa sharci iyo amar
Krysia Lenzo arinta ugu sareysa ee doorashada waa sharci iyo amar [Lahaanshaha Krysia Lenzo]
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka la tartamaya ee Dimuquraadiga ah Joe Biden ayaa ku loolamaya xilka madaxtinimada dalka Mareykanka oo si weyn u kala qeybsan.
Trump wuxuu diiradda saarey “sharciga iyo kala dambeynta”, Biden wuxuu isku dayey inuu diro qoraal heshiisiin ah. Dhaqdhaqaaqa Madadaalada Nolosha Madow, iyo in Trump uu sii deyn doono canshuurahiisa waxay ka mid yihiin arrimaha badan ee Mareykanku ka fiirsan doono markay dooranayaan madaxweynahooda.
Xaakinku wuxuu xukumaa Nevada tirinta codadka codbixinta dharbaaxo ku ah Jamhuuriyiinta
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato doorashooyinka Mareykanka – infographics
Florida waxay u jiheysaa maalinta doorashada iyada oo aan la helin wax cadcad
Khariidaynta wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Mareykanka
Markay soo dhowaato doorashada kulul ee loolanku ka socdo, Al Jazeera waxay lahadleysay cod bixiyaasha guud ahaan Mareykanka iyagoo weydiinaya sagaal su’aalood si ay u fahmaan cida ay taageerayaan iyo sababta.
[Waxaa iska leh Krysia Lenzo]
Da ‘: 31
Shaqada: La Taliyaha Warbaahinta
Deganaanshaha: New York, New York
Waxaa loo codeeyay 2016: Donald Trump
U Codeyn Doonaa 2020: Donald Trump
Arrinta Doorashada ee Sare: Sharciga iyo Nidaamka
Ma cod bixin doontaa? Sababta ama sababta?
“Haa, waan codeyn doonaa maxaa yeelay tani waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu xasaasisan inta aan nool nahay.”
Waa maxay lambarkaaga koowaad?
“Arrintayda koowaad ee aan u wajahayo doorashadan waa amniga dalkeenna iyo ilaalinta dadka ku nool magaalooyinkeenna. Waxaan u maleynayaa in sharciga iyo nidaamku muhiim yahay. La’aanteed, runti ma shaqeyn karno bulsho ahaan, wax walbana waxay ka dhasheen ilaalinta muwaadiniinteena iyo inaan hubinno inay nabadgelyo ku dareemayaan jidadkeenna.
Waxaan ka imid Magaalada New York – oo ku dhashay kuna barbaaray – iyo xaqiiqda ah in dambiyada ka dhacay Manhattan ay kor u kaceen in ka badan 300 boqolkiiba bilihii la soo dhaafay… runtii waa dhibaato, haweenkuna, gaar ahaan, inay nabadgelyo ku dareemaan magaalooyinkooda oo ay dareemaan sida waa la ilaaliyay, waxaan u maleynayaa inay taasi aad muhiim u tahay. ”
Yaad u codaynaysaa?
“Waxaan u codeyn doonaa Donald Trump.”
Ma jirtaa sabab weyn oo aad u dooratay musharraxaaga?
“Waxaan u xushay madaxweyne Trump inuu yahay musharraxkeyga maxaa yeelay waan ku kalsoonahay, waan ogahay halka uu taagan yahay. Isagu waa mid dhab ah, oo ka duwan kan ka soo horjeeda, Joe Biden. Waan ognahay waxa uu ka fikirayo iyo in kale iyo haddii kaleba inaan ku raacsanahay wax kasta oo uu ku dhaho Twitter, isagu waa ugu yaraan hufnaan.
“Uma baahnin inaan ognahay halka uu [Joe Biden] taagan yahay, si fudud ayaa loo sasabi karaa qof walba. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in Kamala Harris, oo ah ku-xigeenkiisa, uu aad uga fog yahay meelo badan oo jagooyinkiisa ah. Aad ayey u cabsi badan tahay in laga fikiro inuusan aqoon waxa uu u taagan yahay. Waana ku cadahay faallooyin badan oo uu sameeyo – wuxuu u janjeeraa inuu flip-flop. Uguyaraan Donald Trump, waan ognahay halka uu taagan yahay, waxaan ognahay inuu ilaalin doono balanqaadyadiisii ​​sidii uu ku sameeyay xiligiisii ​​koowaad. Waxaana aaminsanahay inay taasi aad muhiim u tahay. ”
Miyaad ku faraxsan tahay xaaladda waddanka?
Kuma faraxsani xaalada wadanka hada, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in warbaahinta guud iyo teknolojiyada weyn ay si weyn u kala qeybiyeen dalkeena. Waxaan rajeynayaa in wax walba ay hagaagi doonaan doorashada kadib. Kuma eedeynayo Donald Trump tan. Aniguna waxaan aaminsanahay, nasiib daro, waxaan joognaa heer fikirka uu si layaableh uqaybsaday markii aan loo baahnayn.
“Waxaan dhihi lahaa waxaan ahay mid qunyar socod ah oo muxaafid ah, waxaanan saaxiibo ku leeyahay marinka, waxaana u maleynayaa inay aad muhiim u tahay inaan la hadlo dad badan oo ka kala socda aragtiyo kala duwan. Waa wax aad iyo aad looga xumaado in warbaahintu ay isku dayeyso inay inaga dhigto cadaw. Tani waa wax ay tahay in aynaan oggolaan, maxaa yeelay waxaan horay u haysannay cadaw fara badan oo adduunka oo dhan ah, tusaale ahaan, Shiinaha waa dhibaato weyn oo dalkeenna ka jirta. Waxay soo farageliyeen macluumaadkayaga, tikniyoolajiyadeena, iyadoo aan laga hadlin xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee halkaas ka dhacay.
“Runtii waa inaan diirada saarnaa mideynta qarankeena, waxaana aaminsanahay in Donald Trump, in kasta oo ay warbaahintu tiraahdo, uu runtii yahay musharaxa in uu sameeyo. Waxaan u maleynayaa inuu sameeyay intii ugu wanaagsaneyd ee uu siin lahaa duruufaha cudurka coronavirus. Wuxuu xiray xadka waqtiga ku haboon. Xitaa ma ogin waxa uu qaban lahaa Joe Biden haddii uu ku hoos jiri lahaa cadaadis ah in Donald Trump la saaray xil ka qaadis, iyadoo la ogsoon yahay xaqiiqda ah in qof walba uu isku dayayo inuu baabi’iyo.
“Waa wax aad iyo aad u dhib badan in laga fikiro inuu dhab ahaantii fursad u haysto inuu ku guuleysto doorashadan. Xaaladda waddanku hadda, haa, ma fiicna, laakiin waxba kuma laha Donald Trump iyo wixii uu isku dayey inuu sameeyo. Wuxuu sameynayay wax walba oo suura gal ah si uu dhaqaalaheena u sii wato [socodsiinta], iyo inuu wadankeenu kor u sii socdo, in kasta oo xaqiiqda ah in meel kasta oo laga baxo – oo ay ku jiraan xitaa qaar ka mid ah xarumaha ugu muxaafidsan – ay isku dayayaan inay isaga dumiyaan sabab kasta ha noqotee. ”
Maxaad jeclaan lahayd inaad aragto isbeddel?
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko siyaasiyiinta, ninkasta oo ay yihiin, labada dhinac ee wadada, joojiya ciyaarista siyaasada xisbiyada oo ka fikiraya dadka.
“Waxaan lashaqeeyaa qaar kamid ah musharixiinta siyaasada oo runti aad uqurux badan, oo ah musharixiin dhalinyaro ah. Marwalba waxaan u sheegaa, ‘Aan iska dhigno siyaasada xisbiyada oo aan ka wada shaqeyno sidii aan u sameyn lahayn waddan wanaagsan, maxaa yeelay dhamaadka maalinta, kulligeen waxaan nahay Mareykan.’ Taasina waa waxa na midayn kara. Runtiina waxaan aaminsanahay dhinac kasta oo aad ka gasho dariiqa aad marayso, dhammaanteen waxaan aasaas ahaan u doonaynaa in dalkeennu nabad noqdo. Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan helno fursado isku mid ah, xuquuq siman. Ugu dambeyntiina, haddii aad tahay dimoqraadi ama muxaafid, waxaan dooneynaa waxa ugu fiican dadkeenna.
“Taasi waa sababta aan ugu maleynayo inay aad muhiim u tahay horay u socodka si loo abuuro isbedel – xitaa ma ahan daruuri qaar ka mid ah musharixiinteena – runti waa habka aan midba midka kale ula hadalno shaqsi ahaan. Waxaanan aaminsanahay in warbaahinta, guud ahaan, ay aad u kala qaybsan tahay, oo ay isku dayeyso inay dalkeenna burburiso. ”
Miyaad u malaynaysaa inay doorashadu wax uun ka beddelayso?
“Waxaan u maleynayaa in doorashada ay badali doonto waxyaabo badan oo kala duwan, maxaa yeelay hada, hadalada waa kuwo aad u kacsan, maxaa yeelay labada dhinacba waxay isku dayayaan inay midba midka kale kala jeexjeexo. Waxaan sugayaa doorashada kadib, maxaa yeelay waxaan rajaynayaa in dadku deganaan doonaan oo ay awood u yeelan doonaan inay caqli badan ku yeeshaan go’aanno badan oo la qaadanayo.
“Marka la dhaho, waan argagaxsanahay hadii Joe Biden la doorto, maxaa yeelay, markale, ma ogin waxa uu dhab ahaan u taagan yahay, marka la fiiriyo rikoorkiisa raad raac, ee la siiyay qaar ka mid ah faallooyinka uu sameeyay. Marka, waxaan qabanayaa tabashooyin badan, oo badan haduu xafiiska joogo. Xitaa awoodiisa maskaxeed ee waqtigaan waa mid aniga quseysa. ”
Waa maxay welwelkaaga ugu weyn ee Mareykanka?
“Welwelka ugu weyn ee aan haatan ka qabo Mareykanka waa haddii Joe Biden la doorto, wuu tanaasulay, marka la eego macluumaadka ugu dambeeyay ee aan ka ogaanay wiilkiisa, Hunter Biden. Macluumaadkan hada waxaa xaqiijiyey FBI, iyo saxafiyiinta- iyaga ayaa wata macluumaadka hortooda, waxay hayaan emayl si ay u cadeeyaan. Faragalinta shisheeyana waa dhibaato weyn. Waxaa jira xiriirro badan oo fara badan oo aan aragno inta u dhaxeysa Joe Biden iyo Shiinaha, Joe Biden oo ku sugan Ukraine. In laga fikiro in madaxweynaheena – hadii loo doorto madaxweyne – Joe Biden ay suuragal tahay in lagu waxyeeleeyo dhanka amniga qaranka waa mid aad iyo aad u
Ma jiraan wax aynaan weydiin oo ku saabsan doorashada oo aad rabto inaad wadaagto?
Sida haweeney muxaafid ah oo ku nool New York, waxaa jira fikrado qaldan oo badan oo ku saabsan waxa aad aaminsantahay. Waxaana jira fikrado badan. Nasiib darrose, waxaan ku jirnaa marxalad nolosha ka mid ah oo dadku jecel yihiin inay ku tuuraan ereyo ‘cunsuriyad’, ‘iyo’ homophobic, ‘ama, waad ogtahay, xitaa iyadoo la tixgelinayo diintaada, in lagu takooro xaqiiqooyinkaas, lagana fikiro inaad u rumaysan tahay dariiq gaar ah sababo la xidhiidha siyaasaddaada ama diintaada awgood, ama, mar labaad, ujeeddadaada galmada awgeed Waa wax aad looga xumaado.
Taasina waa sababta aan ugu sii adkeeyo xaqiiqda [inaanan ka fikirin waxyaabaha dadku aaminsan yihiin. Waan ogahay Jamhuuriyiinta jinsiga ah, waan ogahay jamhuuriyiinta ka soo jeeda diimaha kala duwan, ee aaminsan waxyaalo kala duwan – dadka pigeonhole kuma qori kartid caqiidadooda. Waa mar kale, waxaad mooddaa inaad qof ku takoorayso diintiisa darteed. Waana wax aad looga xumaado, maxaa yeelay waa inaadan u maleynin in qof uu yahay qof xun fikirkiisa darteed. Taasi waa qaybta murugada leh ee ku saabsan xaaladda adduunka hadda. Waxaanan rajaynayaa in isbaddalkan oo aan rajaynayo in warbaahintu isku daydo inay soo saarto aragtiyo kala duwan.
– Waanan ku qanacsanahay fursadda aad diyaar u tahay inaad ila hadasho aniga oo ah muxaafid maxaa yeelay waxaan ogahay in saxaafaddu isku daydo inay muxaafidku u muujiso qaab gaar ah waxaanan rajaynayaa inaan awoodi karo inaan faahfaahin ka bixiyo sababaha ay muxaafidku u leeyihiin cod iyo maxaa diidaya in dhammaan muxaafidiinta loo arko dadka adduunka ugu xun. ”
Previous articleCivilians killed in ‘horrendous’ western Ethiopia attack
Next articleMaamulka Jaamacada Benadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun cusub (Sawirro)
Wali waxaa is hor fadhiya oo Muqdisho ku shiraya musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo qeybaha kala duwan bulshada Soomaaliyeed oo lagu daray siyaasiyiin iyo madax...
Xisbigii Hanti wadaaga Soomaaliyeed iyo Xoogaga Wadaniyiinta Soomaliyeed Maxay ku kala...
Waa Hubaal Farmaajo wuxuu dalka ku soo celiyay dhaqankii ay Askartu...
Magaalada Muqdiaho waxay soo martay yaan dib loogu celin